M-Media စာအုပ်စင် Archives - Page2of5- News @ M-Media
“မျက်ဝန်းလင်းစေသူ နှင့် ဘဝအလှဆင်သူ” စာအုပ် ဘယ်သူ အကြောင်းရေးတာလဲ?
သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၆ M-Media မိုးစက် သမိုင်းသင်ခန်းစာယူပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့ သမိုင်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်ရန်၊ ယဉ်ကျေးတဲ့ သမိုင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် မျိုးဆက်သစ်တွေ အတုယူနိုင်စေဖို့အတွက် မျက်ဝန်းလင်းစေသူနှင့် ဘဝအလှဆင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟာဂျီဦးသန်းမြင့်စိုးအကြောင်းကို စာရေးဆရာ (၁၈) ဦးက[Read More…]
August 30, 2016 — M-Media စာအုပ်စင်, ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကလောင်ရှင်တွေ စုစည်းရေးသားထားတဲ့ Islam and the State in Myanmar စာအုပ် (စာအုပ်အညွှန်း)
ဇူလိုင် ၁၀ ၊ ၂၀၁၆ M-Media တင်ဆက်သူ-စတီဗင် M.Media စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထား ထုတ်ဝေထားတဲ့ အကျိုးရှိစေမယ့် စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ . စာအုပ်နာမည်ကတော့ Islam and the State in[Read More…]
July 10, 2016 — M-Media စာအုပ်စင်
တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့ဆုံတွေ့ရာ ဗမာပြည် (သို့) အာရှ၏ အချက်အချာ (WHERE CHINA MEETS INDIA) စာအုပ်မိတ်ဆက်
ဇူလိုင် ၂၈ ၊ ၂၀၁၅ M-Media တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယတို့ဆုံတွေ့ရာ ဗမာပြည် (သို့) အာရှ၏အချက်အချာ (WHERE CHINA MEETS INDIA; BURMA AND THE NEW CROSSROADS OF[Read More…]
July 27, 2015 — M-Media စာအုပ်စင်, ဘာသာပြန်, သုတ၊ရသနှင့်အထွေထွေ
စာပေဗိမာန်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ကမန်မျိုးနွယ်စုသမိုင်း
ဧပြီ ၁၄ ။ ၂၀၁၅ M-Media သီဟ ၁၇-၄-၂၀၁၅ ရက်စွဲဖြင့် (ကြိုတင်) ထုတ်ဝေသည့် သာကီသွေးဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၂၀) တွင် ဆောင်းပါးရှင် မောင်ကျော်ဇံ(မင်းပြား)ရေးသားသည့် “ကမန်လူမျိုး မရှိပါ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါး[Read More…]
April 14, 2015 — M-Media စာအုပ်စင်, မြန်မာသတင်း
မြန်မာ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီးဦးရာဇတ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ (EBook)
မေ ၂၃ ၊ ၂၀၁၄ M-Media ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာကြီး ဝမ်းအိုဝမ်းကျော်ဝင်းမောင် ရေးသားပြုစုတဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူ ဝမ်းအိုဝမ်းကျော်ဝင်းမောင် မှာ ”မြန်မာ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်” စာအုပ်ဖြင့်[Read More…]
May 23, 2014 — M-Media စာအုပ်စင်